10 fampianarana video momba ny psychedelic effets mahaliana XNUMX tena mahaliana. Famoronana an-tserasera
Androany, taorian'ny nahitako ireo sanganasa kanto nataon'ireo mpanakanto fanta-daza indrindra eto amintsika, niditra tato amiko ny fahalianako ary nitady fanazaran-tena vitsivitsy aho mba hamolavolana ireo kompositions izay ao anatin'ity rafitra ity na ity volon'ondry ity, ka manafana ny motera. Nahita vitsivitsy aho video tutorials tena ilaina tokoa ary azoko antoka fa hahasoa anao rehetra izay liana hianatra hamolavola ny teknikano sy ny fanazaran-tena amin'ny famoronana karazana hallucinatory. Tsarovy, amin'ny faharetana sy fanoloran-tena dia tontosa ny zava-drehetra.
Mazava ho azy fa raha manana olana ianao amin'ny fidirana amin'ireo iray amin'ireo horonan-tsary na atiny ireo dia aza misalasala avelao aho hilaza hevitra ary koa raha manana fanontaniana, soso-kevitra na mahafantatra fiatraikany mahafinaritra hafa tafiditra ao anatin'io fomba io ianao. Raha tsy misy resaka lavitra intsony dia antenaiko fa mankafizinao ireo fanazaran-tena ireo ary mahasoa anao izy ireo.
Ahoana ny fomba famoronana afisy style psychedelic (rock) manomboka amin'ny rangotra
Vokany 3D tena manome aingam-panahy (manana izany koa izahay amin'ny fantsona YouTube, raha liana ianao)
Mamolavola fifangaroana kaleidoscopic amin'ny fomba tsotra
Sarin'ny tigra aretin-tsaina
Hippie-rock afisy mahazatra an'ireo enimpolo taona
fitambarana psychedelic- abstract ao amin'ny Adobe Photoshop
Vokatry ny famoronana sy mahafinaritra
Mamolavola afisy amin'ny endriny hippie be indrindra avy amin'ny fampiharana Adobe Photoshop
Vokany manokana ho an'ny sarintanin'ny hallucinatory mafana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » 10 fampianarana video momba ny psychedelic effets mahaliana XNUMX tena mahaliana
Kitapo loharano fahavaratra